Bilayska oo daba socda raadka qarxintii kaniisadda Nairobi - Sabahionline.com
Bilayska oo daba socda raadka qarxintii kaniisadda Nairobi Abriil 30, 2012
Bilayska Kenya ayaa goobaya ciddii ka dambaysay weerarkii bambaano ee Axaddii (29-ka April) lala beegsaday kaniisadda ku taal Nairobi, iyagoo xoogga saaraya tilmaamihii ay bixiyeen goob-joogayaashu ee ahaa in nin 20-meeyo jir ahi uu kaniisadda ka baxay ilbiriqsiyo uun ka hor intaanu qaruxu dhicin.
Dhimashada bilayskii Kenyanka ahaa ee la gaaday oo gaartay 31
"Bilayska ayaa ku raad-jooga tilmaamihii ay bixiyeen goob-joogayaasha si ay u aqoonsadaan shakhsiyadda qofka weerarka geystay,” ayuu yiri afhayeenka bilayska, Eric Kiraithe, sida ay Daily Nation werisay. Weerarka ayaa isla goobta ku diley hal qof, waxaanu dhaawacay 15 kale. Laba iyo toban ka mid ah dhaawicii ayaa loo daabbulay cisbitaalka Kenyatta National Hospital, halkaa oo uu mid u geeriyooday dhaawacyadii weerarka ka soo gaarey, sida uu sheeegay S.M. Monda oo ah dhakhtar dhinaca qallliinka ah oo cisbitaalka ka shaqeeya. "Tani waa fal argaggixisannimo,” ayuu yiri Madaxweyne ku Xigeenka Kalonzo Musyoka, oo ka mid ahaa madaxdii dawladda ee dhibbanayaasha cisbitaalka ku booqanaysay. “Waa wax laga xumaado in ay gaareen ilaa xad ay dadka weeraraan xitaa iyagoo cibaadaysanaya. Iyadoo ay sidaa tahay, waxaannu dadka dalka deggan oo dhan ku boorrinaynaa in ay deganaasho muujiyaan.” Muxuu kula yahay qoraalkan?
Arrinkani wuxu noqday wax xad-dhaaf ah, laakiin ilaahay wali waa noolyahay, waxaanu ilaahay arkaa waxaysan bina aadamku arki karin. Markaa dadka dambiilayaasha ah waxaa ku waajib ah inay ogaadaan inay iman doonto maalinta xaqiidu daahfurmi doonto, wax kastoo mugdi ku jiraana maruun buu soo shaac bixi doonaa, qofkastaana goob joog ayuu ka ahaan doonaa.
Alshabaab way u dhamaatay, waayo ilaahay wuu arkaa sharka ay wadaan, meel dheerna gaadhi maayaan.